မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: 05/01/2009 - 06/01/2009
၀ါသနာ?? အင်း.. ကိုကိုမောင်က tag ထားတာကတော့ ခရီးမသွားခင်ထဲကပါပဲ.. ခက်တာက ၀ါသနာပါတာတွေက များနေတော့ မယ်မယ်ရရ ဘာကိုဝါသနာပါရမှန်းမသိဖြစ်နေလို့ မရေးဖြစ်တာ…
ငယ်ငယ်ကဆိုရင်တော့ ဆော့ရတာဝါသနာပါတယ်… အစားထက် အဆော့ကိုမက်တယ်… ညနေရောက်ပြီဆို အောက်ဆင်းဆော့ရမှ ကျေနပ်တယ်.. မဟုတ်ရင် အိမ်ထဲမှာ တစ်ချိန်လုံးဂျီကျနေရော… လမ်းထဲမှာလဲ ဆော့ဖော်ဆော့ဖတ် ဘော်ဒါတွေကလဲ များကြီး ယောကျာင်္းလေး မိန်းကလေး ကျောသားရင်သားမခွဲခြားပဲဆော့တယ်… ဒါပေမဲ့ ပြဿနာတော့ လာမရှာနဲ့ ဘယ်တော့မှ ခံမနေတတ်ဘူး… အဖေကလဲ အောက်ဆင်းဆော့မယ်ဆိုတိုင်း ကတိတောင်းတယ်.. ပြဿနာမဖြစ်အောင်ဆော့. ရန်ဖြစ်မလာနဲ့တဲ့.. အမေနဲ့ အမတွေကတော့ ဆက်ဆုံးမတယ်.. ရန်ဖြစ်ခဲ့ရင်လဲ ခံမလာနဲ့တဲ့… ဒီတော့ ဆော့ပါတယ်ဆိုမှ အငြင်းအခုံလေးတော့ နဲနဲရှိတာပေါ့… ဒါပေမဲ့ မဗေဒါက ရန်ဖြစ်ရင် ဘယ်တော့မှ လက်မပါပါဘူး… အဟဲ… ရန်လေးများဖြစ်လာရင် နောက် ၃ ၄ရက်လောက် အောက်ဆင်းဆော့ဖို့ အခွင့်ရေး ပိတ်သွားတတ်တယ်… ဒီလိုကျတော့လဲ ကိုယ်မဆင်းတော့ ပွဲမစည်ဘူးလေ… နောက်ဆုံးတော့ ရန်ဘယ်လောက်ပဲဖြစ်ဖြစ် သူကလဲ ကိုယ့်ကို ဆော့ဖို့လာခေါ်တယ်.. ကိုယ်ကလဲ ဆော့ရမယ်ဆိုတော့ ပြန်ခေါ်လိုက်တယ်… အင်း. ကလေးဘ၀များ စဉ်းစားရင်းနဲ့ စိတ်ထဲတောင်ပျော်လာပြီ…
ကဲ.. ပြောရင်းနဲ့ topic ကလွဲသွားပြီ… ၀ါသနာကိုပြောတာ.. ငယ်ငယ်က ၀ါသနာက ဆော့တာ.. ရန်ဖြစ်တာဟုတ်ဘူးနော်.. အဟဲ.. အထင်တွေ မှားကုန်အုံးမယ်…
နောက် ၉ တန်း ၁၀တန်းရောက်တော့ ဆော့ချင်သေးပင်မဲ့လဲ စာက များလာတော့ အိမ်က ပေးမဆော့တာက တစ်ကြောင်း… ကိုယ်နဲ့ ဆော့ဖော်ဆော့ဖက်များကလဲ အလွန်တရာမှ ပဲများသွားကြသောကြောင့်တစ်ကြောင်းတို့ကြောင့် မဆော့ဖြစ်တော့ပါဘူး.. အဲဒိအခါမှာတော့ ကိုရီးယားကား တရုတ်ကား တီဗွီက လာသမျှကားမှန်သမျှကို မလွတ်တမ်းထိုင်ကြည့်ပါတယ်… အဟဲ.. ဟဲ…
အဲ ဇာတ်လမ်းကြား ကြော်ငြာဖြတ်လာရင်တောင် နောက်ကျောပေးပြီး တီးလုံးကြားတာနဲ့ ဘာကြော်ငြာလဲဆိုတာကို အမြန်ဆုံး ဘယ်သူပြောနိုင်လဲဆိုပြီး အမတွေနဲ့ ဆက်ကစားပါတယ်… ဟဲ.. ဟဲ.. သူတို့မကစားလဲ ကိုယ်တစ်ယောက်ပဲ ကစားပါတယ်… အဟီး… တစ်ခါတစ်လေ ဘယ်ကြော်ငြာပြီးရင် ဇာတ်လမ်းပြန်လာတော့မယ်ဆိုတာတောင် မှန်းနိုင်တဲ့အတွက် မဗေဒါကို တီဗွီမှော်အောင်တယ်လို့တောင် ရွဲ့ခေါ်ကြပါတယ်..
စာများ ကျက်ရမယ်ဆိုလို့ကတော့ သတင်းတောင် ကြည့်လို့ကောင်းပါတယ်… အဟတ်.. ဟတ်… တီဗွီအစီအစဉ်က “ဒုံ…. မြန်မာ့ရုပ်မြင်သံကြား အစီအစဉ်များ ဒီတင်ပြီးဆုံးပါပြီ” ဆိုတဲ့ စာတမ်းပေါ်တဲ့ အထိကြည့်ပါတယ်… အဲ.. အိမ်က တီဗွီပဲကြည့်နေတယ် စာမကျက်ဘူးဆိုပြီး တီဗွီပေးမကြည့်ရင် လုံးဝကို အရွဲ့တိုက်ပြီး စာမကျက်တော့ပါဘူး..
၁၀တန်းတုံးကတော့ အပေးအယူနဲ့ စာကြည့်ပါတယ်… အဟီး… ဇာတ်လမ်းတွဲ ၇နာရီကနေ ၈နာရီတစ်ချိန်… ၉နာရီခွဲလောက်ကနေ ၁၀နာရီခွဲလောက်ထိတစ်ချိန် ၂နာရီပေးကြည့်ရင် ကျန်တဲ့အချိန် စာကောင်းကောင်းကျက်ပါတယ်… ဒါပေမဲ့ ၁၀တန်းစာမေးပွဲဖြေနေတဲ့အချိန်.. မှတ်မှတ်ရရ သချာင်္ဖြေရမဲ့နေ့မှာ “ပိုးမင်းသားရဲ့ သိုင်းဝိဥာဉ် အပိုင်း၂” ဇာတ်သိမ်းပိုင်း ပြပါတယ်… ကျမကကြည့်ချင်တာကို အဖေက ပေးမကြည့်ပါဘူး.. စာမေးပွဲတွင်းကိုတောင် ဇာတ်လမ်းတွဲကြည့်ချင်သေးလားဆိုပြီး နောက်ဖေးမီးဖိုချောင်မှာ စာအုပ်တွေနဲ့ ပိတ်ထားလိုက်ပါတယ်… ကျမစိတ်ထဲမှာတော့ အဖေက သဘောတူညီချက်ကိုဖြတ်တယ်လို့ထင်မိပါတယ်… သူ့ကို စာမေးပွဲတွင်းမို့ လိုက်လျောပြီး ၇နာရီကားတောင်မကြည့်ပါဘူး… ဒီကားလေး ဇာတ်သိမ်းမို့ ကြည့်ချင်တာကိုပေးမကြည့်ဘူး.. ပြီးတော့ သချာင်္က တီဗွီကြည့်ရင်းလဲ တွက်လို့ရတာပဲဟာ.. ဒါပေမဲ့ ကျမအဖေကလဲ ကျမလိုပဲ ခေါင်းမာတယ်… လုံးဝဆို လုံးဝပဲ.. သူကလဲ နင်မကျက်ရင် နင်စာမေးပွဲကျမှာတဲ့… ကျရင် နောက်နှစ်ကျောင်းမထားဘူး ဘာညာ ခြိမ်းခြောက်တာပေါ့နော်… တကယ်ကျရင်လဲ ထားမှာပါပဲ… (သိနေသော်လည်းကိုယ်လဲ နည်းနည်းတော့ ကြောက်တာပေါ့နော်…) သူလာကြည့်ရင် တမင်စာမကျက်ပဲနေပြတယ်… သူထွက်သွားမှ ကိုယ့်ဟာကိုယ် စာကြည့်တယ်… လာမကြည့်တာ ကြာလာတာပဲဖြစ်ဖြစ် အိမ်ရှေ့က တရုတ်ကားသံကြားရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်.. စိတ်တိုလာရင် နောက်ဖေးက ပန်းကန်တွေတင်ထားတဲ့စားပွဲကို ပိတ်ကန်တယ်… ကွဲမှာလဲ ကြောက်ရသေးတယ်.. အသံကျယ်ရုံလောက်အားနဲ့ ကန်ရတာပေါ့နော်… နောက်ဆုံး အဖေနဲ့ ကျမရဲ့ တင်းမာမှုကြောင့် အစ်မ အကြီးဆုံးကပဲ ကျမကိုလာပြောတယ်.. သူ ကူးပေးထားပါ့မယ်.. စာမေးပွဲပြီးရင် ကြည့်ပါတဲ့… တကယ်တော့ အဲဒါဟာလဲ ကျမကို ညာခဲ့တာပါပဲ.. တကယ်တမ်းတော့ မကူးပေးခဲ့တာ စာမေးပွဲပြီးမှ သိပါတယ်… အသဲကွဲတယ်ဆိုတဲ့ ခံစားချက်ကို အဲဒိတုန်းက ရည်းစားမထားဖူးပင်မဲ့ ခံစားဖူးသွားတယ်… သစ္စာဖောက်ခံရတယ်.. အညာခံရတယ်.. စိတ်ထဲမှာတော့ စွတ်စွဲချက်မျိုးကို စုံလို့ပေါ့…
ကျမအဖေက ကျမကို သချာင်္ကို စိုးရိမ်တာက နောက်မှသိတယ်.. သချာင်္ကျူရှင်ဆရာက သချာင်္အခြေအနေမကောင်းဘူးလေး ဘာလေး အဖေကို တိုင်ထားတော့ စိတ်ပူတာပါ.. အမှန်တော့ ကျမသချာင်္အခြေအနေမကောင်းတာမဟုတ်ပါဘူး… ကျမက သချာင်္သင်ရင် ခရေစိတွင်းကျ ပေါက်ပေါက်ရှာရှာလိုက်မေးတတ်ပါတယ်.. အဲဒါကိုပဲ ဆရာက ကျမကို သချာင်္ညံ့တယ်များ ထင်သွားသလားသိပါဘူး… ဇာတ်သိမ်းမှာတော့ ကျမ ရဲ့ ဂုဏ်ထူးရဘာသာတွေထဲမှာ သချာင်္လဲပါပါတယ်… အိမ်ကလူတွေကတော့ ဗေဒါတို့ တရုတ်ကားတွေသာ မကြည့်ရင် All D ထွက်မှာ ဆိုပြီး ငြူစူကြပါတယ်… ကျမစိတ်ထဲမှာတော့ ကျမကို စာမေးပွဲတွင်းပါ တရုတ်ကားပေးကြည့်ရင် All D ထွက်မှာလို့ ကျိတ်ပြီး ပြောမိပါသေးတယ်… ကြည့်ပြီးတာနဲ့ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ကြောက်ပြီး စာကို အသေဖိလုပ်ဖြစ်မယ်ထင်တာပဲ…
ဇာတ်လမ်းတွဲတွေကြည့်တဲ့ ၀ါသနာကတော့ ခုချိန်ထိကို ပါနေတုန်းပဲ… ငွေကုန်သက်သာတယ်.. လူ မပင်ပန်းဘူး… အချိန်ကုန်မြန်တယ်… ကြည့်နေတဲ့အချိန် အပြင်က စိတ်ညစ်စရာတွေ မေ့နေတယ်… ဘယ်လောက်ကောင်းလဲ… အဲ.. မဗေဒါကို ရုပ်ရှင်ကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာ ဘေးက စကားလာပြောတာ သိပ်မကြိုက်ဘူး… ပြောမယ်ဆိုရင်လဲ ရုပ်ရှင်ကို ခဏရပ်ပြီးမှ ပြောစရာရှိတာကို ပြောတယ်.. တချို့ကရှိတယ်… အစကတော့လာမကြည့်ပဲနဲ့.. ဘေးကနေ.. ဇာတ်လမ်း အလည်လောက်ရောက်မှ အဲဒါဘယ်သူလဲ.. ဘာကားလဲ.. ဘယ်လိုဇာတ်လမ်းလဲ.. တစ်ခုပြီးတစ်ခုလာမမေးနဲ့ မကြိုက်ဘူး… ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ကားတွေကို သူများတွေနဲ့ ဝေမျှရတာကို ၀ါသနာပါပါတယ်.. သိချင်တယ်ဆိုရင် ကြည့်ပြီးသလောက်ထိ သေသေချာချာ Pause လုပ်ပြီးရှင်းပြမယ်… ပြီးရင် အေးအေးဆေးဆေးဘေးမှာကြည့်.. ဘေးကနေ လာကြည့်လိုက်.. ထသွားလိုက်.. ပြီးမှ လာမေးလိုက်လုပ်နေတာ မကြိုက်ပါဘူး.. အပြင်လူဆိုရင်တော့ မဗေဒါ ဘာမှမပြောပါဘူး… ကိုယ်တိုင်လဲ မကြည့်တော့ပဲ ထထွက်သွားတတ်ပါတယ်… ဒါမှမဟုတ် အစကနေ နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ကြည့်ပါတယ်… အိမ်သားတွေဆိုရင်တော့ ပြန်ပြောနေကျ တစ်ခွန်းရှိတယ်… “ရုပ်ရှင်ကို လေးလေးစားစားကြည့်ပါ” လို့… ဟဲ…. ဟဲ….
၂၀၀၄ခုနှစ်လောက်မှာ ပထမဆုံး အိမ်သုံး ဗွီဒီယိုကင်မရာလေးကို ကျမအစ်မက၀ယ်လိုက်တယ်… အဲဒိ ကင်မရာနဲ့ပဲ ဟိုရိုက်ဒီရိုက်ပဲ… အဲဒိအချိန်တုန်းက တိတ်ကင်မရာပဲ.. ကွန်ပြူတာထဲ တိုက်ရိုက်ထည့်လို့မရဘူး… ကိုယ်ကလဲ သိပ်မလုပ်တတ်တော့ ဆိုင်မှာပဲ စီဒီသွားသွားဘန်းရတယ်… ဒါပေမဲ့ Home video တွေက ပြန်ကြည့်ရင် ၁ ခေါက် ၂ခေါက်အပြင် ပျင်းဖို့ကောင်းလာရောလေ… လက်ကမငြိမ် ကင်မရာကတုန်.. ဇာတ်လမ်းဇာတ်ကွက်မရှိပဲ ရိုက်ချင်ရာတွေ လျှောက်ရိုက်ထားတာ ကြည့်လို့မကောင်းမှန်းသိလာတယ်.. ကြည့်လို့ကောင်းတဲ့ ပိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ video လေးတွေလုပ်ချင်လာတယ်…
ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ရုပ်ရှင်လုပ်တာကို အရမ်းအားကျခဲ့တဲ့ အဖြစ်တစ်ခုရှိတယ်… ၂၀၀၁ခုနှစ်လောက်တုန်းက “Time Travelers” ဆိုပြီး သိပ္ပံကားဆန်ဆန် ဇာတ်လမ်းလေးကို MRTV3မှာပြတယ်.. အဲဒိဇာတ်လမ်းလေးကို ဖန်တီးတဲ့သူတွေက ကျမအထက်တန်းကျောင်းက တစ်တန်းထဲတူတူတက်ခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ.. သူတို့တွေက ငယ်ငယ်ထဲက ကွန်ပြူတာနဲ့ လက်ပွန်းတတီးနေခဲ့တော့ ကျောင်းမှာထဲက ကွန်ပြူတာနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ ပြိုင်ပွဲတွေဆို ၀င်ပြိုင်ခဲ့တယ်… အဲဒိဇာတ်လမ်းထဲမှာပါသမျှ စက်ရုပ်တွေ… အာကာသ ယဉ်တွေအားလုံးကို သူတို့ကိုယ်တိုင် ဒီဇိုင်းထုတ်ပြီး.. ဂရက်ဖစ်နဲ့ ဆွဲခဲ့တယ်... အ၀တ်အစားဒီဇိုင်း… ဇာတ်လမ်း.. သရုပ်ဆောင် အကုန်လုံးက သူတို့စိတ်ကူးနဲ့ ဖန်တီးပြီး ဖြစ်မြောက်အောင်လုပ်ခဲ့ကြတယ်… သူငယ်တန်းထဲက ၁၀တန်းထိ အတန်းထဲမှာ မမြင်ချင်မှ အဆုံး မြင်ဖူးခဲ့ပင်မဲ့.. အဲဒိဇာတ်လမ်းထဲမှာတော့ သူတို့ကို တကယ်အထင်ကြီးခဲ့တယ်… အားလဲကျတယ်… ခုထက်ထိလဲ ချီးကျူးတယ်… ၁၀တန်းအောင် အရွယ်လေးတွေနဲ့ ဒီလောက်လုပ်နိုင်တာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ သူတို့က ပထမဆုံးပါပဲ… အဲဒိအတွက် သူတို့ကို နိုင်ငံတော်ကလဲ ထူးချွန်ဆု ချီးမြှင့်ခဲ့တယ်… ဇာတ်လမ်းက အဆုံးထိ မပြီးပါဘူး… နောက်ပိုင်းတော့ အဲဒိထဲကခေါင်းဆောင် ဒါရိုက်တာလုပ်တဲ့ ကောင်လေးက အင်္ဂလန်ကိုထွက်သွားတော့ ဆက်မလုပ်ဖြစ်တော့ဘူး… သူ့ဝက်ဆိုဒ်မှာတော့ သူတို့လုပ်ထားတဲ့ Project လေးတွေ တင်ထားပါတယ်.. ဒီမှာ သွားကြည့်လိုက်ပါ… ဘေးက ဆိုဒ်ဘားက Project > Motion Graphics > time travellers ဆိုပြီးသွားပါ..
အပေါ်ကပြောသွားတာကတော့ အရင်က အားကျခဲ့ရတာပါ.. ကိုယ်လိုက်လုပ်နိုင်မဲ့ အခြေအနေမျိုးလဲမရှိသလို အခွင့်အရေးမရခဲ့ပါဘူး… ကျမ ပထမဆုံးရတဲ့ကင်မရာကလဲ တိတ်ခွေနဲ့ဆိုတော့ ဘာမှ မယ်မယ်ရရမလုပ်တတ်ပါဘူး… ဒါပေမဲ့ နောက်ပိုင်း ရုပ်ရှင်တွေကို ကြည့်တဲ့အခါမှာ.. ဇာတ်လမ်းကိုလဲကြည့်တဲ့အပြင်… သူတို့ ဘယ်လို ရိုက်လဲဆိုတာကိုပါ စိတ်ဝင်တစားကြည့်လာတတ်တယ်… မင်းသမီးဘာဝတ်လဲဆိုတာထက်… သူဘယ်လိုသရုပ်ဆောင်လဲ… ဒီလိုအခန်းမျိုးမှာ ကင်မရာကဘယ်နေရာကထားပြီးရိုက်လဲ… ဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာ နောက်ခံတီးလုံးထည့်လိုက်ရင် ဘယ်လိုခံစားရလဲ… ဘယ်လိုနေရာမျိုးတွေမှာတော့ ရုပ်ရှင်သဘောအရရိုက်လဲ… အဲဒါတွေကို လိုက်ကြည့်ရတာ ကျမအတွက် ပျင်းစရာမကောင်းဘူး… သီချင်းရိုက်ပုံရိုက်နည်းနဲ့ ရုပ်ရှင်စာတန်းထိုး ဒီဇိုင်းတွေ ဘာကွာလဲ… ဥပမာ.. ကိုရီးယားကားရှေ့တွေမှာ စာတန်းထိုးရင် များသောအားဖြင့် ရုပ်ရှင်ထဲက ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေကိုပဲ ပြန်ယူပြီးသီချင်းနဲ့ သရုပ်ဆောင်အမည်နဲ့ ထိုးတတ်ပင်မဲ့.. ဂျပန်နဲ့ ထိုင်ဝမ်ကားတွေမှာတော့ စာတန်းထိုးအတွက် သီးသန့်ရိုက်တတ်ကြတယ်…
ငယ်ငယ်ကတည်းက Jackie Chan ကားတွေကြည့်လို့ နောက်ဆုံးမှာ ဘယ်လိုရိုက်လဲပြန်ပြတာကို အရမ်းသဘောကျတယ်…
ခုတိုးတက်လာတဲ့ နောက်ပိုင်းမှာတော့ youtube တို့ဘာတို့မှာ ရုပ်ရှင်ကားတွေ ရိုက်တာတွေ ပြန်ပြတဲ့ ဗွီဒီယိုလေးတွေရှာလို့ရတယ်… ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေကြည့်ပြီးရင် youtube မှာ Making of movie တွေနဲ့ NG တွေကို ပြန်လိုက်ကြည့်ရတာလဲ ၀ါသနာပဲ…
နောက်ကျောင်းပြီးလို့ အလုပ်လုပ်တော့မှပဲ IT Show ပွဲတစ်ခုမှာ ကိုယ့်အကြိုက် Hard disk ကင်မရာတစ်လုံးကို ထပ်ဝယ်လိုက်တယ်… အဲဒါက အဆင်ပြေတယ်.. ရိုက်ပြီးတာနဲ့ ကွန်ပြူတာထဲထည့်လို့ရတော့.. ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် ပြန်ပြီး အက်ဒစ်လုပ်လို့ရတယ်… လုပ်ကြည့်တော့လဲပျော်တယ်.. အက်ဒစ်တင်းကို အရမ်းဝါသနာမပါပင်မဲ့ ကိုယ်က ကောင်းကောင်းကြည့်ချင်တော့ လုပ်ရတာပဲ… အက်ဒစ်တင်းကလဲ self learning လုပ်ပြီးနဲနဲပါးပါးတတ်တယ်… adobe primier pro ကတော့ ခုထက်ထိကိုမတတ်သေးဘူး… window movie maker တော့ တော်တော်လေးသုံးတတ်နေပြီ…
ဒါပေမဲ့ ပန်းချီတို့ ဒီဇိုင်းတို့တော့ မရဘူး.. ပန်းချီဆိုလုံးဝမဆွဲတတ်ဘူး… Graphic design တို့ animation တို့ စိတ်ဝင်စားပေမဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ယုံကြည်မှုမရှိဘူး… Making Movie လဲ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ယုံကြည်မှုမရှိပါဘူး… ၀ါသနာဆိုလို့သာ ၀ါသနာပေါ့နော်…
၀ါသနာပါတာနဲ့ လုပ်စားဖို့ကျတော့ Passion ရှိဖို့လိုလာပြီ.. အတော်လေး စိတ်ထဲမှာ ခိုင်မာမှ ဖြစ်မှာ… ခုလက်ရှိ ရှိနေတဲ့ လမ်းပေါ်ကနေ မဆိုင်တဲ့လမ်းပေါ်ကို ခုန်ကူးပြစ်လိုက်ဖို့ကျတော့ ချီတုန်ချတုန်ဖြစ်နေတယ်… တခါမှလဲ ကိုယ်က အဲဒိလိုင်းနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဘာမှ မလုပ်ဖူးတော့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်လဲ ပါရမီမှ ရှိရဲ့လားလို့ သံသယဖြစ်မိတယ်… ဒွိဟဖြစ်တယ်ဆိုကတည်းက ကိုယ်ကိုတိုင်က စိတ်ထဲက မခိုင်မာလို့လားလို့ တွေးမိတယ်… ကိုယ်လုပ်ချင်တာကို လုပ်လိုက်လို့ မအောင်မြင်လာရင် အိမ်က ကိုယ့်အပေါ်ရင်းနှီးထားသမျှတွေ အလကားဖြစ်သွားမှာစိုးရိမ်တယ်…
တစ်ခါတစ်လေ စဉ်းစားမိတယ်… လောကမှာ ဘယ်နှစ်ယောက် ကိုယ့် Dream ကိုယ့်ဝါသနာနောက်ကို ရဲရဲလိုက်ရဲခဲ့သလဲလို့… ကိုယ်ရောက်နေတဲ့နေရာနဲ့ ကိုယ်လုပ်နေတဲ့ အလုပ်ကို နှစ်ခြိုက် စိတ်ဝင်စားပြီး ပျော်နေတဲ့သူတွေနဲ့ အခြေအနေပေးတာာကိုပဲ ဘာခံစားချက်မှမထားပဲ ရောက်တဲ့နေရာမှာပဲ အလုပ်လုပ်နေကြတဲ့သူတွေ ဘယ်အရေအတွက်က ပိုများသလဲလို့ တွေးမိတယ်… သေချာတာကတော့ ကိုယ်ဝါသနာပါတာကို အဆိုးရော အကောင်းရောလက်ခံ ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဆုံးဖြတ်ပြီး ရည်ရွယ်ချက်နောက် ရဲရဲလိုက်နေတဲ့သူတွေတွေ့ရင်တော့ အရမ်းအားကျတယ်..
ခုတော့ အဲဒိအတွေးတွေကြားမှာပဲ… ၀ါသနာကနေ Passion ဖြစ်အောင်၊ ၀ါသနာနဲ့ ဘ၀၊ ဘ၀နဲ့ အမှန်တရား၊ အားလုံး တစ်ထပ်တည်းကျအောင် ဘာလုပ်ရင်ကောင်းမလဲစဉ်းစားရင်း ခုထက်ထိ ရှေ့လျှောက်ဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတာ မသိသေးပဲ… မဗေဒါတစ်ယောက် လမ်းဆုံမှာ ထိုင်ပြီးတော့သာ ရေစုံမျောရင်း ဒီပိုစ့်လေးနဲ့အတူ Tag ကြွေးဆပ်လိုက်ပါတယ်…
PS.. ခုမှ Tag ကြွေးဆပ်လိုက်လို့ အတိုးရော အရင်းပါပေါင်းပြီး ရေးလိုက်တာ ရှည်သွားတယ်ကွယ်…
Posted by mabaydar at 9:50 PM9comments :
Labels: Tag , ဗေဒါ့အကြောင်း
ပြန်ရောက်ရောက်ပြီးချင်း မရောက်သေး ဟန်ဆောင်ပြီး ပိုစ့်မတင်ပဲနေလို့များရမလားလို့… တိတ်တိတ်လေးနေနေပင်မဲ့ သိတဲ့သူတွေကလဲ သိနေ.. ပိုစ့်ရေးဖို့ ပြောလာတဲ့သူတွေကလဲရှိတော့ အားနာလာတယ်လေ…
အမှန်တော့ မဗေဒါပိုစ့်မရေးဖြစ်တဲ့ အဓိက အကြောင်းပြချက်က ၃ချက်ရှိပါတယ်..
ပထမတစ်ချက်က ပြန်ရောက်ပြီးကတည်းက ၁ရက်ပဲနားပြီး နေ့တိုင်းအလုပ်ပဲသွားနေရလို့ပါ… သုံးတုန်းက သုံးပြီးတော့ ခုမှ ပြန်ရုန်းနေရလေရဲ့… ဟတ်… ဟတ်…
ဒုတိယအချက်ကတော့ တော်တော်ဆိုးပါတယ်... ခရီးမသွားခင် ၂ပတ်လောက်ထဲက အလုပ်ထဲမှာ အင်တာနက်ဖြတ်ခံထားရပါတယ်… ဘာရယ်ညာရယ်တော့မဟုတ်ပါဘူး… ချစ်လှစွာသော အိုင်တီဋ္ဌာနကလူများက အင်တာနက်ရှိရင် ဗိုင်းရက်စ်ဝင်ပြီး သူတို့အလုပ်ရှုပ်ပါတယ်ဆိုပြီး လာဖြတ်သွားတာပါ… (မေတ္တာကိုမရှိဘူး အင်တာနက်မရှိလဲ ဗိုင်းရက်စ်ကိုက်အောင်လုပ်တတ်ပါတယ်နော်... အဲလိုသူများကပြောတာပဲ.. မဗေဒါဟုတ်ဝူး.. အဟိ..).. ဒီတော့ ၁ရက်မှာ ၁၂နာရီ အလုပ်လုပ်တယ်.. အလုပ်အသွားနဲ့ အပြန် ၂နာရီပေါင်း ၁၄ နာရီ အိမ်ပြန်ရောက်တော့ ညစာစား.. မေလ်း လေးစစ်.. facebook က pet society လေး ကစားလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲ နာရီက ၁၁နာရီဘယ်လိုကျော်နေမှန်းမသိ..
ပြန်ရောက်ပြီးတည်းက ဓာတ်ပုံလေးတွေ တင်လိုက်… ကင်မရာပေါင်းစုံနဲ့ ရိုက်လာတဲ့ပုံတွေကို ကွန်ပြူတာထဲထည့်.. သူငယ်ချင်းကင်မရာနဲ့ ရိုက်ထားခဲ့တဲ့ပုံတွေကို ဒေါင်းလုပ်ဆွဲ… အချိန်တွေက ဟိုလှည့်ဒီလှည့်နဲ့ အိပ်ချိန်တွေသာ မလိုအပ်ရင်သိပ်ကောင်းမှာပဲ.. ၁ရက်မှာ ၂၄နာရီက သိပ်နည်းလွန်းနေတယ်…
အင်တာနက်လေးနဲ့က မျက်နှာချင်းဆိုင်ရတာဆိုလို့ ခုဆို ၁ရက်မှာမှ ၃ ၄ နာရီလောက်ပဲရှိတယ်.. မသနားဘူးလားဟင်… သနားပါတယ်နော်… (မသနားလဲ အားနာပါးနာ သနားလိုက်ပါ…)
အဲ… နောက်ဆုံးအချက်ကတော့... ကြွေးထူတဲ့သူ မပူ... သန်းထူတဲ့သူ မယားဆိုတဲ့ စကားပုံလေးအတိုင်း မဗေဒါလဲ ဘလော့မှာ ရေးဖို့အကြွေးတွေအရမ်းများနေတော့ အချိန်ကမလောက် ဘာကို အရင်စရေးရမလဲကမသိနဲ့ ခေါင်းတွေရှုပ်ပြီး ပစ်ထားလိုက်တော့တာပါပဲ... ဂျပန်သွားတုန်းကအကြောင်းကလဲ ခုမှ ၃ရက်မြောက်နေ့ထိပဲရေးရသေးတယ်… ၁၀ရက်ရှိတာ... ခုလဲ ကိုရီးယားခရီးစဉ်က ထပ်ရေးဖို့ရှိလာပြန်ပြီ… နောက်ပြီး ကိုကိုမောင် တက်ဂ်ထားတဲ့ ကိုယ့်ဝါသနာအကြောင်းလဲ ရေးဖို့ရှိသေးတယ်… တက်ဂ်ထားတာတောင် တော်တော်ကြာပြီ… ခုထိမရေးရသေးလို့ မေ့တောင် မေ့နေပြီလားသိဘူး… စိတ်လဲမဆိုးစေချင်ဘူး… ရေးဖြစ်အောင်ကို ရေးမှာပါ… ရေးလဲ ရေးချင်ပါတယ်…
ခရီးသွားအကြောင်းကိုတော့ လူကြိုက်သည်ဖြစ်စေ... မကြိုက်သည်ဖြစ်စေ... ကိုယ်ပိုင်မှတ်တမ်းလေးတစ်ခုအနေနဲ့တော့ မဗေဒါက ရေးမှာပါ... များသောအားဖြင့် ခရီးသွားမှတ်တမ်းတွေက ပိုစ့်ရှည်ပြီး ပျင်းစရာကောင်းချင်ကောင်းနေမှာမို့ စာလာဖတ်တဲ့သူတွေကိုလဲ အားနာတယ်လေ…
လောလောဆယ်တော့ ဟိုက ၀ယ်လာတာလေးတွေ လက်ဆောင်ပေးရအုံးမပေါ့… ၀ယ်ပြီးပြီးချင်း ဓာတ်ပုံမရိုက်မိပဲ… ခုမှ ပိုစ့်တင်တော့ တစ်ချို့လက်ဆောင်တွေက ပေးပြီးသွားပြီ… ဒီတော့ ရှိတာလေးတွေယူနော်…
ကိုရီးယား ကောင်လေးတွေ ကောင်မလေးတွေကတော့ ဆိုးပါဘူး… ချောတဲ့သူတွေရှိသလို မချောသူတွေလဲ ရှိတယ်… ရာသီဥတုကြောင့်ပဲလား… skin care product တွေကပဲ ကောင်းလို့လားတော့ သိဘူး… အသားအရည်ကတော့ အတော်လှကြတယ်… မျက်နှာပေါက်တွေကတော့ မျက်ပေါက်မှေးမှေး… မျက်ခွံမရှိ ပုံစံလေးတွေချည်းပါပဲ… ချောနေရင်တောင်မယုံရဘူး… ခွဲစိတ်ပြုပြင်ထားတာတွေက ခပ်များများရယ်… ဒါပေမဲ့ ကိုယ်တို့ အဖွဲ့ရဲ့ လက်ထောက် ဂိုက် (သို့) ဓာတ်ပုံဆရာလေးကတော့ အတော်မိုက်တယ်… မျက်နှာက အချောကြီးမဟုတ်ပင်မဲ့ Average ထက်တော့သာတယ်… အကြိုက်ဆုံးကတော့ အရပ်အမြင့်ကြီးပဲ… အသားဖြူဖြူ နှာတံပေါ်ပေါ်… မိုက်မှ မိုက်… ကိုယ့် စံနဲ့တော့ ကွက်တိပဲ… အဟိ… (ကြော်ငြာဝင်မိပြီထင်တယ်နော်… ဘွာတေး… နောက်မှပဲ တွေ့ခဲ့တဲ့သူတွေအကြောင်းရေးတော့မယ်…)
အော်… ဒါနဲ့ မဗေဒါ ဟိုမှာ စားခဲ့သမျှတွေကိုတော့ တတ်နိုင်သလောက် သူငယ်ချင်းတွေကို အွန်လိုင်းမှာ စိတ်ကူးနဲ့စားလို့ရအောင် ဓာတ်ပုံရိုက်လာတယ်… မဆိုးပါဘူး… ထင်ထားတာထက်တော့ အတော်လေး စားကောင်းခဲ့တယ်… Swine flu ဖြစ်နေကာမှ… ခရီးစဉ်တောက်လျှောက် ၀က်သားနဲ့ပဲ ရက်တော်တော်များများ နှစ်ပါးသွားခဲ့တယ်… စားကြပါအုံးနော်…
ပထမဆုံးကိုးရီးယားမှာ စားခဲ့ရတဲ့ နေ့လည်စာ... (၀က်သား အရမ်းကောင်းတယ်...)
ရုပ်ရှင်ထဲမှာ သူတို့သောက်နေကျ ဟင်းချို... guide ကတော့ နာမည်ပြောတယ်.. မေ့သွားပြီ.. အတော်သောက်ကောင်းတယ်...
ဂျဲဂျူးမှာ စားခဲ့ရတဲ့ ကိုရီးယားရောက် ပထမဆုံးညစာ... SeaFood steamboat ... ပင်လယ်စာကအတော်လတ်တယ်...
ရိုးရိုးကြက်ဥကြော်နဲ့တော့ အရသာနဲနဲကွဲတယ်... သူတို့က မုန့်နှစ်တစ်မျိုးနဲ့ ထည့်ကြော်ထားသေးတယ်... ကြက်သွန်မိတ်လေးတွေလဲပါတယ်... ဒါလဲစားကောင်းတယ်... ဒါလဲနာမည်မေ့လာတယ်...
ဂျဲဂျူးမှာ ဒုတိယနေ့ နေ့လည်စာ... ၀က်သားကို သူတို့ဆီက ကိုရီးယားဟင်းနှစ်တစ်မျိုးနဲ့ ဒယ်အိုးပေါ်မှာကြော်ပြီး အရွက်နဲ့ ထုပ်စားရတာ... စားလို့အရမ်းကောင်းတယ်... စားအကောင်းဆုံးဟင်းတွေထဲက ဟင်းတစ်မျိုးပေါ့...
ဒါက ကြက်သားနဲ့ ဂျင်ဆင်း စွတ်ပြုတ်... ဒုတိယမြောက်ညမှာကြွေးတဲ့ ညစာ... ကြက်အထဲမှာ ကောက်ညှင်းပါတယ်... ခေါက်ဆွဲလေးတွေလဲ ထည့်စားလို့ရတယ်... ၄လကနေ ၆လအတွင်း ကြက်လေးတွေကိုချက်တာတဲ့... ဂိုက်ကပြောတော့ သနားသွားတယ်... အဲဒါကြောင့် သေရကျိုးနပ်အောင် အကုန်စားခဲ့တယ်... အဲဒိညက ဆိုဂျူး (ကိုရီးယားအရက်)တွေလဲ တိုက်တယ်... ကိုယ်ကတော့ မသောက်ခဲ့ပါဘူး... အနံ့ကတော့ အရက်ပြန်အတိုင်းပဲ... ရာသီဥတုကလဲ အတော်လေးအေးတယ်...
ဂျဲဂျူးတတိယမြောက်နေ့ Breakfast Abalone ဆန်ပြုတ်... ဂျဲဂျူးက Abalone ပေါမှန်းတော့သိပါတယ်... ဒါပေမဲ့ Abalone ရော ဆန်ပြုတ်ရောကို အစထဲက မကြိုက်တော့ အဲဒိနေ့က နဲနဲပဲ စားခဲ့တယ်... နာမည်ကြီးဆန်ပြုတ်ဆိုင်မှန်းတော့သိပါတယ်... ဒါပေမဲ့ ကိုယ်မှ မကြိုက်တာ.. ကြိုက်တဲ့သူအတွက်ကတော့ အတော်ကောင်းမှာပါ... အဲဒိ ဆန်ပြုတ်ဆိုင်လေးက Loving you ရုပ်ရှင်ကားထဲမှာပါတဲ့ coffee ဆိုင်လေးနဲ့ ၃ ၄ ဆိုင်အကွာလောက်မှာရှိတာ... ကမ်းရိုးတမ်းလမ်းဆိုတော့ ရှုခင်းလေးတော့ အတော်လှတယ်...
၁ဇွန်း ၂ဇွန်းလောက်ပဲ စားပြီး အားနေလို့ ဓာတ်ပုံရိုက် ပဲလုပ်နေတဲ့ မဗေဒါ....
ဒါကတော့ ဆိုလ်းကို စရောက်ရောက်ချင်းနေ့က ကျွေးတဲ့နေ့လည်စာပါ... Everland နဲ့ နီးတယ်... ဒုတိယနေ့ကကျွေးတာနဲ့ နည်းနည်းဆင်ပါတယ်... ဒါပေမဲ့ ဒါက ပိုစားကောင်းတယ်... ၀က်သားကို အရွက်ထဲထုတ်စားရတာပဲ... ဘာကွာလဲတော့မသိဘူး... စားကောင်းကောင်းနဲ့စားလိုက်တာ စားပြီးမှ ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့သတိရတယ်ကွယ်... ချိတ်ချိုးကြပါနဲ့နော်...
ဆိုလ်းမှာ ပထမဆုံးစားတဲ့ ညစာ... ကြက်သားနဲ့ အာလူး ကိုရီးယားစတိုင်ပေါ့... ဒါလဲစားကောင်းတာပဲ... ဘေးက side dish ချဉ်ဖတ်လေးတွေနဲ့လဲ အတော်လေးလိုက်တယ်... မှတ်မှတ်ရရ အဲဒိဆိုင်က ဆိုင်ရှင်မိန်းမက အတော်လေး ချောတယ်... ကျက်သရေရှိတယ်ပြောရမလားပဲ...
ဆိုလ်းအနီး DaeMyung Resort က ကျွေးတဲ့ မနက်စာ ဘူဖေး... ကိုယ်ကြိုက်မယ်ထင်တာတွေ ကောက်ထည့်ပြီး အမြန်ဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့တယ်...
အဲဒိနေ့က နေ့လည်စာကတော့ သွားရင်းလာရင်း အဝေးပြေးလမ်းပေါ်က Service Area မှာ ကိုယ့်အစီအစဉ်နဲ့ကိုယ်စားခဲ့ရတယ်... ညစာကိုတော့ ဆိုးလ်မြို့ထဲက တရုတ်စားသောက်ဆိုင်မှာ ကြွေးတယ်... စားသောက်ဆိုင်ကအတော်သားနားပါတယ်... ခါတိုင်းလို လူငယ်တွေနဲ့အတူ ထမင်းဝိုင်းမကျပဲ စလုံး ဖွားဖွားအတ္တများနဲ့ ကျခဲ့လို့ အနေအထိုင်လေး ဆင်ခြင်ပြီး လက်မနှေးရအောင် အပြတ်လွေးခဲ့လို့ ဓာတ်ပုံမရိုက်ဖြစ်ခဲ့ဘူးကွယ်...
ဒါကတော့ နောက်နေ့ နေ့လည်စာ sha bu sha bu လို့ခေါ်တယ်... ပူပူလေးမှာ အရွက်တွေနဲ့ ၀က်သားပြားတွေ ထည့်ပြီး သောက်ရတဲ့ ဟင်းချို... စားခဲ့သမျှထဲမှာ ဒီ menu ပဲ နာမည်မှတ်မိတယ်... လွယ်လဲလွယ်တယ်... အရင်က ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာလဲ ကြားဖူးလို့ဖြစ်မယ်...
ကဲ... ကဲ.. ခုလောက်ဆို အားလုံး တော်တော်လေး ဗိုက်ဝသွားလောက်ပြီထင်ပါတယ်... ရှန်ဟိုင်းမှာကျွေးတာတွေ တင်လိုက်ရင် စိတ်ကုန်သွားမှာဆိုးလို့ မတင်တော့ပါဘူး... ရှန်ဟိုင်းမှာတော့ ကိုကိုယ်တိုင်လဲ စိတ်က အတော်လေးမှ ညစ်နွမ်း စုတ်ပြတ်ပြီး Mood မကောင်းတာနဲ့ ဓာတ်ပုံတောင် ရိုက်ချင်စိတ်သိပ်မရှိခဲ့ပါဘူး... အကြောင်းစုံကိုတော့ နောက်များကျမှပဲ ဆက်လက်တင်ဆက်ပါအုံးမယ်....
Posted by mabaydar at 10:26 PM 14 comments :